sketchy ipad mini 6 inodonhedza mapoinzi akananga mu-screen touch id, punch-hole kamera
Kuru Nhau & Ongororo Sketchy iPad mini 6 inodonhedza nongedzo yakananga-mu-screen Kubata ID, punch-hole kamera
Sketchy iPad mini 6 inodonhedza nongedzo yakananga-mu-screen Kubata ID, punch-hole kamera
Inofungidzirwa CAD-based renders yeiyo iPad mini 6
David Kowalski akaburitsa michina yakati wandei mumwedzi gumi nembiri yapfuura kusanganisira Google Pixel 5, Galaxy Note 20, uye iPhone 12 Pro. Munguva pfupi yapfuura, akagovana rinopa iyo iyo Pro Pro (2021) , uye ikozvino adzoka mukudyidzana naNguruvekugovana zvinonzi mifananidzo yeiyo iPad mini 6.
Zvimwe zvinhu zvekudonha uku zvinoita kunge kushomeka, hazvo, saka ita shuwa kutora idzi dzinofungidzirwa dzeCAD-yakavakirwa pini yakanaka yemunyu.
Iyo iPad mini 6 inogona kupa punch-hole kamera
Yechizvarwa chechitanhatu iPad mini ichaunza yakakura kwazvo 9.1-inch kuratidzwa ichichengetedza zviyero zvakafanana neyaakatangira. Kuti ive chaiyo, iyo ukobvu hwakawedzera ne 0.15mm asi kukwirira uye upamhi zvinoramba zvisina kuchinja.
Kugadzira izvi zvichikwanisika iwo mabhezera matete ayo izvozvi anogara akatenderedza skrini. Ming-Chi Kuo yakaratidza pane 9-inch iPad mini 6 ine ese-skrini dhizaini muna Chivabvu apfuura, saka chishandiso chinoratidzwa pamusoro uye pazasi chinowirirana neicho fungidziro.
Asi zvinhu zvinowana kunakidza (uye zvakatonyanya kudavirika) kana iwe ukanyatso tarisa pane iyo pani. Kusiyana nemamwe ese-e-screen iPads, inotevera-gen iPad mini inonzi inounza punch-hole tech.
Inofungidzirwa kuti CAD-based renders yeiyo iPad mini 6 Iyo iri kushandiswa kune iyo selfie kamera iyo iri pamusoro pechiratidziro, inova yakajeka nyaya yekushandisa. Asi Apple haisati yamboshandisa izvi zvisati zvaitika uye kuzvipira kwayo kune yunifomu bezels uye notches zvinoita kuti ive isinganzwisisike kufamba.
Ehe, iko kunogona kuve kutanga kweye nyowani dhizaini mutauro kune iyo kambani, saka dhizaini inogona kunge iri yechokwadi.
Apple's inotevera iPad mini inogona kuve yekutanga ne-in-screen Kubata ID
Chikamu chidiki chinotendeseka chemifananidzo iyi chinogona kuwanikwa pahafu yepasi pekuratidzira. Kunyanya, iyo inotevera-gen piritsi inoratidzwa ine chekawo cheTouch ID chigunwe chigunwe scanner.
Hazvina kujeka kuti izvi ndezvekuenzanisira here kuti kuvepo kweiyo yepasi-skrini Kubata ID kuitisa, senge iyo inotarisirwa mukati iyo iPhone 12S Gare gare gore rino, kana Apple ichinzi iri kuronga kutema kukuru.
Asi kana iyo yekupedzisira iri zvinoreva izvi, izvo zvinoita sezvisingaite, kunyanya kuApple iyo inowanzo dzivirira zvisingaenzaniswi dhizaini chero zvodii muchifarira chinhu chiri nyore.
Tarisira iyo iPad mini 6 kusvika muhafu yekutanga ya2021
Iyo iPad mini 6 inotarisirwa kusvika muhafu yekutanga yegore rino, zvingangoitika pachiitiko mukupera kwaKurume padivi neiyo Pro Pro (2021) mutsara uye yechitatu-chizvarwa iPhone SE, kana paWWDC 2021 muna Chikumi.
Inofanirwa kupihwa simba neA14 Bionic, parizvino inoshandiswa mukati meiyo iPhone 12 nhevedzano, uye inosanganisira zvese chiteshi chemheni uye 3.5mm headphone jack, ese ari maviri anowanikwa pane iyo iPad mini 5.
Iyo yakasara yehwendefa rekunze kwepakeji rine muviri wealuminium ine kamera diki kumashure, bhatani remagetsi kumusoro, uye makiyi evhoriyamu kuruboshwe kuruboshwe.
Apple & apos; inonzi iPad mini 6 vs iyo iPhone 12 Pro
galaxy tab s7 zuva rekubudiswa
yakanakisa kudhirowa app yechinyorwa 8
Hapana mutungamiriri anotsigira Fortnite uye PUBG? Hapana dambudziko! Shandisa iyi lifehack yekuwedzera mabhatani kufoni yako!
AT & T inotangisa iyo Samsung Galaxy S10 5G, asi pane & apos; s inobata
Verizon inosundira software kugadzirisa kune iyo Galaxy S6, s6 kumucheto, S6 kumucheto +, uye Cherechedzo 5: Heino & apos; izvo izvo & apos; zvitsva
Classic MMORPG RuneScape pakupedzisira inotanga pane iOS uye Android